कसैले जनमतलाई खेलवाड नगरौं - Pura Samachar
अहिले मुलुकमा साढे दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै दुई तिहाई बहुमतको जननिर्वाचित सरकार छ । यो सरकारलाई जनहितको पक्षमा काम गर्न केले छेक्यो ? बहाना वाजी मात्र गरेर पाँच बर्षको समय बिताउने की काम गरेर देखाउने ? नेकपाका लागी यो काम गर्ने ठूलो अवसर हो , सधै भरी अवसर नआउन पनि सक्छ । जोश ,जाँगर र उत्साहका साथ काम हुनु पर्दथ्यो , मेसो केहि छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पनि साढे दुई वर्षभन्दा बढि भै सक्यो । एक्लै दुई तिहाई बहुमत नजिकको संघीय सरकार छ । सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेकपाकै दुई तिहाइ बहुमतका सरकार छन् । यो सरकारलाई काम गर्न केले बाधा पुयाएको छ ? अचम्म लाग्दो कुरा यो छ । कम्युनिष्ट पार्टीको यो सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा अघि सारेको पनि साढे दुई वर्षभन्दा बढि भै सक्यो । नारा अति सुन्दर छ । यही नाराले कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत आएको हो । जनताको मतलाई खेल वाड गर्न मिल्दैन । अहिले सरकारले जनमतलाई खेलवाड गरिरहेको छ । कोराना भाईरस संग जुधन नसकेर सरकार पिठयु फर्काएर भागेको छ । महामारीसित जुधन नसक्ने सरकार संग अरु के धेरै आश गर्नु ? सरकारले कोरोना भइसर संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न नसक्ने बताएको छ । यस्तो सरकारले जनताको भाग्य र भविश्य कसरी निर्माण गर्छ ?
यदि जनता निराश भए भने आगामी निर्वाचनमा अहिलेको सत्तारुढ नेकपाले अकल्पनीय पराजय भोग्नु पर्ने खतरा आउन सक्छ । लोकतन्त्रमा जनताको भावनाअनुसार हिँड्न नसक्ने दल असफल हुने छन । यीनीहरुलाई जनताले सधै भरी काँध थापिरहनु पर्ने जरुरी छैन । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो अस्तित्वको औचित्य गुमाइसकेको छ । अहिले संक्रमण दर बढ्दै जादा सरकार अताल्लिएको छ । धरौटी रकम जम्मा नगरी सरकारी अस्पतालमा समेत संक्रमितको उपचार हुँदैन । अवस्था यस्तो छ । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेर भाग्नु भनेको लज्जाको बिषय हो । नागरिकहरूले राज्यलाई कर तिरेका छन् । कानुन पालना गरेका छन् । सरकारको आदेश पालन गरेका छन् । तर सरकारले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य रक्षाको काम गर्न सकेको छैन । यो बिडम्वना हो ।